Ukuhonjiswa kwekhompyuter → Ukuhonjiswa kwekhompyuter / iP & M iimpahla zokuhombisa
Ukuhonjiswa kwekhompyuter yenye yeendlela ezaziwayo zokumakisha iimpahla kunye neempahla. Kungenxa yembali yayo eyaqala kumakhulu eminyaka eyadlulayo, apho kumaxesha amandulo abafazi babemiliselwe iipateni kumalaphu ngesandla.
Kule mihla, ukuhonjiswa kusetyenziswa ngokuzenzekelayo kusetyenziswa umatshini olawulwa yikhompyuter ngokwenkqubo yokuhombisa, eyenzelwe ngokukodwa uyilo ngalunye lwegraphic.
Uyilo oluncinci kumalaphu anobunzima obukhulu kunolo lweeteki zemveli zikhangeleka kakuhle. Impahla eyenziwe ngumntu inezibonelelo ezininzi. Imveliso enjalo ime ngaphandle kokhuphiswano, yomeleza umfanekiso wenkampani kwaye yakhe imeko yoluntu phakathi kweqela kwimeko yokunxiba.
Ukulungiswa kweekhompyuter kwenziwa kwimpahla nakwimpahla eyolukiweyo
Ukuhonjiswa kweekhompyuter kunokusetyenziselwa ngesibindi ukuvelisa izixhobo zeempahla ezilukiweyo impahla yokubhengeza. Ilogo ehlanganisiweyo kunye negama lenkampani kwipolówkach, iingxowa okanye iitawuli Unokuba sisipho esihle kubathengi okanye kumaqabane oshishino. Ngokusebenzisa iimpahla ezinjalo okanye iimveliso zentengiso, baya kukhuthaza uphawu.
Ukongeza kwimpahla, ukuhonjiswa kuhlala kwenziwa kwiimveliso ezinjengeengxowa, iminqwazi, iitawuli kunye neebhafu zokuthambisa. I-logo eyimfakamfele yomelele ngokuqinisekileyo kwaye iyamelana nokuxhaphaza kuneendlela ezizezinye zokumakisha ngemizobo yokubambelela.
Isiko lokuhombisa iikhompyuter
Ukuvalelwa yindlela yokuhombisa eyaziwayo kwakudala, xa abafazi beyimfakamfele imifanekiso kwiimpahla, amalaphu etafile kunye neeflegi ngesandla. Ukuphakama kunye nokuqina kokuhonjiswa kubenze baba yinto yeenkcubeko ezininzi, kunye nophawu lwemimandla ethile ngohlobo lwesinxibo sabantu kunye neebhanile.
Umgangatho ophezulu kunye nokuqina kokumakisha kwe-embroidery kukwafumene isicelo kwintengiso yanamhlanje. Abasebenzi abanxibe iimpahla ezinophawu lwenkampani bahlala bebonwa njengabameli beenkampani ezithembekileyo nezingaziwayo. Kwakhona amalaphu ehotele ngohlobo lweetawuli okanye iibhabhu ezinelogo ezonyusa iwonga lehotele.
Abalungiseleli kunye nabathengisi abaxhotyiswe ngempahla eyenzelwe wena njengeefaskoti okanye iifaskoti nazo zibonwa njengehambelana nophawu, kwaye ke oko kukhuthaza ukuthembana okukhulu, okusoloko kuguqulela kwizigqibo zokuthenga zabathengi. Ukuhonjiswa kukwazisa nezixhobo zentengiso ezamkelweyo ngokuqinisekileyo.
Izixhobo ezihonjisiweyo ngohlobo lweebhegi, ii-cap, ii-T-shirts zihlala zisetyenziswa kukhuphiswano oluququzelelwe ziinkampani njengenxalenye yokunyusa okanye njengee-freebies zabathengi.
Ipaki yematshini yokwenza iimpahla zekhompyuter
Itekhnoloji yanamhlanje kunye nezinto ezikhoyo ngoku zivumela ukuba sihlangabezane neemfuno zentengiso ezikhulayo zeemveliso ezinokuhonjiswa. Ngombulelo koomatshini banamhlanje, namhlanje kunokwenzeka ukuba wenze amawaka emifekethiso ngexesha elifutshane ngelixa ugcina ukuchaneka koyilo. Olu phuhliso lwezoqoqosho luguqula nexabiso elinomtsalane lokuhombisa.
Ukuhonjiswa kweekhompyuter - itekhnoloji esinayo
Oomatshini banamhlanje baneenaliti ezininzi zokufaka umsonto imibala efanelekileyo yeprojekthi. Inkqubo yokuhombisa ilawulwa yinkqubo yekhompyuter apho uyilo lufakwa khona. Kwelethu icala ukufumanisa indawo efanelekileyo yokufaka ubuchwephesha kunye nobukhulu bayo. Ukucetyiswa kwe-embroidery kuyacetyiswa kwiiprojekthi ezincinci, kungoko ukuthandwa kwayo kokushicilela iilogo, amagama eenkampani, amaziko kunye nezikolo.
Izinto eziluncedo nezingalunganga zokuhombisa iikhompyuter
Ukubonakala kwengubo enemifuziselo yinto eyenza ibonakale. Ukuhonjiswa okwenziwe ngokuchanekileyo kunika impahla eyolukiweyo umgangatho omtsha kunye nobuhle, kwaye uphawu olubhengezwe nguye luzuza udumo. Akukho sidingo sokukhathazeka ukuba imizobo okanye isicatshulwa siya kucinywa ekuhlambeni okanye emva kwexesha elide lokusetyenziswa.
Ukuhonjiswa kwekhompyuter yinxalenye yengubo kwaye ngenxa yoko kunenzuzo ebalulekileyo kunezinye iindlela ezicociweyo okanye imingxunya yenziwa kukuceka kancinci kancinci. Ukuhonjiswa kwekhompyuter kunokuba phantse nawuphi na umbala. Umda kuphela umbala wentambo esetyenzisiweyo.
Ukulungiswa kwe-embroidering kwenziwa ngokubonga ngokuthe ngqo kulawulo lwekhompyuter. Inkqubo kunye nokuchaneka kokuhonjiswa kwekhompyuter kuvumela isisombululo esiphezulu seepatheni ezimfakamfele. Ukuhonjiswa ngokulula kuhlawulwa ngexabiso elikhulu.
Uncedo olongezelelekileyo lixabiso lexesha elinye lokulungiselela inkqubo yokuhombisa, ehlala kwindawo yethu elungileyo. Ke ngoko, kwixa elizayo, ukuba umthengi ubuya e-odola iimpahla ngendlela efanayo, uya kukhululwa kwimirhumo yenkqubo.
Izinto ezilukiweyo zekhompyuter zineengxaki, kodwa zinokuthintelwa ngokukhetha indlela efanelekileyo yokumakisha yohlobo lwezinto kunye noyilo. Yiyo loo nto kucetyiswa ukuba unxibelelane neengcali ngaphambi kokuyalela ukumakisha kwakho okokuqala ukunqanda iziphene ezinokubakho.
Ngokuchasene nokuprintwa okupheleleyo komphezulu wekhompyuter, ukuhombisa akunakusetyenziselwa ukuthunga umzobo opheleleyo kunye noluhlu olungenamda lwemibala.
Nangona kunjalo, ayisiyiyo le nto imalunga noku. Ukuhonjiswa yinto ekubhekiswa kuyo kwisiko kuba ifana neebhatyi zeengalo ezihombise iimpahla ezintle. Ayinanto yakwenza nekitschy, imizobo enokuhlambeka.
Ukuhonjiswa akucetyiswa ukuba kulukiwe kwizixhobo ezinesigrama esingekho ngaphezulu kwe-190 g / m2. Ukuhonjiswa okukhulu kuya kunika umbono we "khaka", kuya kuba bhetyebhetye ngexesha lokusetyenziswa, kwaye xa kusetyenziswa kwinto encinci - iinaliti zinokugqobhoza into encinci.
Ukufakelwa kwekhompyuter kwilaphu elisezantsi elinesiseko esisezantsi akunakubotshwa. Kucingelwa ukuba igrama yeengubo kufuneka igqithe kwi-190 g / m2. Nangona kunjalo, kunzima nokuba nomfanekiso ngqondweni wento ehlanganisiweyo kwi-T-shirt engabizi kakhulu kangangokuba yonke into iyibonisa ngayo.
Yimalini ukuhonjiswa kwekhompyuter?
Ukuhonjiswa kwekhompyuter kuthelekisiwe kwezoqoqosho. Nangona kunjalo, izinto ezininzi zidlala indima kuxabiso oluchanekileyo. Ngokwabo, ukuhombisa kubiza ixabiso eliphantsi xa u-odola iimveliso ezininzi. Ukongeza, ubungakanani bokuhonjiswa kunye nokuntsonkotha kwemizobo kunefuthe elikhulu kwixabiso, eliguqulela kuxabiso loxinano lokuhombisa. Eyona nto inkulu yokuhombisa, ukugoba okungaphezulu, ukudityaniswa kunye nobukhulu obukhulu, kokukhona ukujiya kukuxinekile. Kwakhona, inani leendawo ekubekwe kulo ubugcisa (umzekelo ilogo ngaphambili kwesifuba sasekhohlo + ilogo embindini womqolo) kubalulekile kumaxabiso eyunithi. Ixabiso alisoloko lichaphazeleka kwinani lemibala esetyenzisiweyo, njengoko umatshini wokuthunga unemisonto emininzi. Iindleko zokulungiselela kufuneka zongezwe kwi-odolo yokuqala yokuhombisa Inkqubo yokuhombisaesele ikwisiseko sedatha kwaye ke ayongezwa kwi-odolo elandelayo.
isambatho sekhompyuteroyimfakamfele kwizambathoI-T-shirt enemibalaIsikipa esine logoimpahla enelogoimpahla enombhalopoloukuphawula iimpahla ezimfakamfele kwizikipaiimpahla zokumakisha iimpahla ezinophawu
Linganisela lo mnikelo
Impahla ekhuselayo (iiseti)
Iivoti kunye neetanki zentloko
Iikipa / iipolo
Izikhephe kunye neminqwazi
Iibhokisi / iiVoti
Ibhulukhwe / iibhulukhwe ezimfutshane
Iitowudi / iibhafu zokuhlambela
Isinxibo esibonakalayo esiphakamileyo
Iindlwana zokufihla amanzi
P & M. Onke amalungelo agciniwe 2021
uyilo kunye nokuphunyezwa: pixelsperfect.pl - Iiwebhusayithi zePoznań